Soosaarayaasha Tooska ah ee Shiinaha Soosaarayaasha Tayada Sare ee Polyester Thailand barkimooyinka barkinta | Rayson
Barkinta Xumbada Xummada ee HighQuality Latex Jumlada-Rayson Guga Furaash Soo Saaraha
Kuweenna muuqaalada gudaha.
Rayson Global Co., Ltd waa shirkad wadaag ah oo Sino-US ah, oo la aasaasay 2007 taas oo ku taal Shishan Town, Foshan High-Tech Zone, waxaana lagu dhajiyay meel u dhow shirkadaha caanka ah sida Volkswagen, Honda Auto iyo Chimei Innolux. Waxaan ballanqaadeynaa in badeecooyinka loo diro macaamiisha iyagoo nabad qaba oo xasiloon. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad rabto inaad wax badan ka ogaato our si toos ah noo soo wac. Ilaa hadda, Rayson wuxuu ka gudbay shahaadada nidaamka maareynta tayada caalamiga ah. Dhammaan alaabooyinka oo ay ku jiraan alaabtayada cusub
waxaa la siiyaa naqshad casri ah, tayo la hubo, iyo qiimayaal tartan ah. Iyada oo khadadka wax soo saarka oo dhammeystiran iyo shaqaale khibrad leh, Rayson uu si madax-bannaan u qaabeyn karo, u horumarin karo, u soo saari karo, una tijaabin karo dhammaan badeecadaha si hufan.
Muddo intee le'eg ayey joodarigaagu soconayaa? Joodar walba wuu ka duwan yahay. Haddii aad tuurto habeenkii ama aad ku soo toostid xanuun waa waqtigii aad heli lahayd furaash cusub iyada oo aan loo eegin da '. Waxaan kugula talineynaa inaad hubiso sumadda sharciga oo aad bedesho ugu yaraan sideed sano kasta. Waxaan ku sameyn karnaa furaashka sida aad u qorsheysan tahay ama waxaan u bixin karnaa adeegga OEM kaliya waxaad u baahan tahay inaad na siiso farshaxankaaga wax soo saarka ama sawirrada astaanta. Haa, ku soo dhawow inaad soo booqato wershedeena wakhti kasta, waxaan u dhownahay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Guangzhou Baiyun, kaliya waxay ku qaadataa hal saac baabuur, waxaanan diyaarin karnaa baabuur si aan kuu soo qaadno.